Max�ed Xasan Xaad �C/llaahi Yuusuf kama taliyo Dalka ee waxaa ka taliya Gen. Gabre�
Weerar xalay lagu qaaday Saldhiga Booliiska Hawl-wadaag
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka cabanaya Mushaar la�aan soo food saartay
Sarkaal ka tirsan nabad sugida Puntland oo la dilay
Xubno ka tirsan Xiriirka Soomaaliyeed iyo Olombikada safar ku tagay Puntland
Ujeedo: Canbaarayn Xasuuqa ay Ciidamada Tigreegu ka wadaan S/Galbeed
the situation report for 6th of July updating on security, displacement, access and humanitarian response in Somalia [pdf]
Max�ed Xasan Xaad oo ka mid ah Odoyaasha dhaqanka Beelaha Hawiye ayaa waxa uu ku celceliyey in aysan dagaalsaneyn Beelaha Hawiye balse la isku haysto dhinaca Siyaasadda, waxaa kale oo uu sheegay Max�ed Xasan Xaad in Madaxweyne C/llaahi Yuusuf ay horey ugu qoreen waraaqo oo ay ugu faahfaahiyeen qaabka loo qaban karo dib u heshiisiinta Soomaliyeed, waxa uuna sheegay in waraaqahaasi ilaa iyo haatan aan wax jawaab ah laga helin.
�C/llaahi mar hore ayuu nooga soo jawaabi lahaa waraaqahaasi, laakiin waxaan ogaanay in C/llaahi uusan wadanka ka talin, ee uu ka taliyo Gen. Gabre� ayuu yiri Max�ed Xasan Xaad oo sheegay in ay si weyn uga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay inay dhibaato ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, taas oo isugu jirta dil, dhac iyo xarig.
�Kalsoonida shacabka laguma kasban karo dil, dhac iyo xarig, ee waa in ay Dowladdu arrintaasi ka fiirsataa� ayuu yiri Max�ed Xasan Xaad oo sheegay in aysan marnaba ka qaybgali doonin shirka dib u heshiisiinta Soomaliyeed ee lagu wado in 15-ka bishan ka furmo Magaalada Muqdisho.
Go�aan ay dhawaan soo saareen Beelaha Hawiye ayaa waxay ku sheegeen in dalka uu ku jiro gumeysi wax shir ahna aan lagu qaban Karin, iyagoo sheegay in haddii la doonayo in shir lagu qabta loo baahan yahay in la helo goob dhex dhexaad ah.
Xalay fiidnimadii ayaa waxaa la maqlay rasaas la iswey-daarsanayo, waxaan weerarkaasi lala beegsaday degmada saldhiga Degmada Hawl-wadaag.
Rasaastaan oo socotay dhowr daqiiqo ayaan la ogeyn khasaarihii ka dhashay iyadoo ahayd xili habeen ah, isla markaana Magaalada Muqdisho saran tahay bandow.
Saldhiga ayaa waxaa u soo gurmaday ciidamo ka tirsan Dowladda FKMG kuwaas oo bilaabay inay ilaalo xoog leh ka qabtaan wadooyinka soo gala saldhigaasi.
Ma ahan markii ugu horeysay oo weerar lagu qaado shaldhig booliis, habeen hore ayay ahayd markii weerar lagu qaaday saldhiga Waabari oo ay ku dhaawacmeen afar askari, waxayna weeraradani ku soo beegmayaan xili ay ciidamada Dowladda Muqdisho ka wadaan baaritaan xoog leh, waxayna shalay la soo bandhigay hub fara badan oo noco badan leh oo ay sheegeen guddiga nabadgelyada Muqdisho in ay ka soo qabteen suuqa Bakaaraha.
Saddex qarax ayaa shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho, waxa uuna kii koowaad ka dhacay Suuqa Xoolaha, waxaana ku geeriyooday oo labo ka mid ah ay ahaayeen carruur, waxaana ku dhaawacmay toban kale oo shan ka mid ah ahaayeen carruuur.
Qaraxaan oo ahaa miino la dhigay biyo dageenka Suuqa Xoolaha ayaa inta uusan qarxin waxaa arkay carruur ku cayaareysay wadada mid ka mid ayaan laadahay miinadaas oo ku jirtay baakad, halkiina ayuu qaraxu ka dhacay.
Miinadaasi oo lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciidamada Dowaldda iyo kuwo Itoobiya ayaana aheyn markii ugu horeysay oo miinoo noocaas ah la dhigo jidadka. Dhawaan ayay ahayd markii miino la dhigay goob qarashinka laga nadiifinayey oo ay ku geeriyoodeen haween dhowr ah.
Qarixii labaad ayaa shalay ka dhacay suuqa Bakaaraha waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo afar qofood, siodoo kale Isgoyska Wadada Aadan Cadde ayaa waxaa ka dhacay qarax, waxaana la sheegay in qaraxaasi uu a haa banbaano, waxaana ku dhaawacmay hal qof.
Mudo dhowr bilood ah ayaa Xubnaha Baarlamaanka oo ay tiradodu gaareyso 275 aysan wax mushaar ah helin, waxaana mushaar ugu dambeysay sida la sheegay xiligii uu madaxda Baarlamaanka ka ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Xubnaha Baarlamaanka ayaa waxaa mushaar siin jiray hay�ado caalami ah, ilaa iyo haatanna lama garanayo sababaha mushaar loogu la� yahay xubnaha Baarlamaanka Soomaliyeed.
Qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka ayaa waxay ku eedeyeen mas�uuliyinta sarsare ee Dowladda in ay ka gaabiyeen sidii ay mushaar ku heli lahaayeen xubnaha Baarlamaanka.
Sheikh Aadan Max�ed Nuur oo ah guddoomiyaha Baarla-maanka ayaa isagu dhowr jeer dadaal u galay sidii ay mushaar ku heli lahaayeen Xubnaha Baarlamaanka balse taas kuma uusan guuleysan
Wararka naga soo gaaraya Maamul Gobaleedka Puntland waxay sheegayaan in Magaalada Boosaaso lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsnaa ciidamada nabad sugida Puntland gaar ahaan kuwa la dagaalama waxa loogu yeero argagixisada.
Dilkaas oo uu gaystay nin ku hubeysnaa bistoolad ayaa markii dambe baxsaday, waxaana lagu waramay in Booliisku ay baadigoob ugu jiraan ninkaasi, sidoo kale waxay wararka ka imaanay Guriceel waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay nin lagu waramay in uu la shaqeynayey dowladda Federaalka.
Habeen hore ayay ahayd markii magaalada Muqdisho lagu dilay nin caan ka ahaa degmada Shibis una shaqeynayey Hay�adda SOYDAN, kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdi Wardoon.
Waxaa maalmahan deegaanada Gobalada dalka gaar ahaan Muqdisho ku soo kordhayey dilalka loo gaysanayo shaqsiyaadka la shaqeeye Dowladda Federaalka.
Tan iyo markii xiriirka loo doortay Siciid Max�ed Nuur in uu hogaamiyo xiriirka Soomaaliyeed ee K/cagta ayaa waxaa xiriirka ku yimid is bedel weyn oo dhinaca dibadda iyo gudaha, waxaana dhawaan xubno ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed ee K/cagta u ambabaxeen gobolo ka tirsan dalka, kuwaas oo soo indha-indheeyey baahida Isboorti ee gobaladaasi.
Gudoomiyaha xiriirka Soomaliyeed Siciid Mugaanbe oo uu la socdo xoghayaha Xiriirka C/qaani Siciid Carab ayaa waxa booqasho ku tageen gobalada hoos taga Puntland, waxayna kulamo kula yeesheen mas�uuliyiinta xiiirada kala duwan ee Puntland.
Siciid Mugaanbe ayaa waxa uu sheegay in xiriirka Soomaaliyeed ay ka go�an tahay in gobalada Soomaaliyeed uu gaarsiiyo K/cagta, isla markaana uu ka qayb-qaato horumarinta k/cagta.
Siciid Mugaanbe waxa uu sheegay in ay fulinayaan talooyin u soo jeediyeen Xiriirka K/cagta adduunkae e FIFA oo ah in xoogga la saaro Gobalada si ay horumar u gaarto cayaaraha K/cagta Soomaaliya.
Wafdiga Xiriirka K/cagta ee Punlland tagay waxaa safarka ku weliyey mas�uuliyiin ka tirsan Guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo uu hogaaminayey Aadan Xaaji Yabarow Wiish, waxayna labada dhinac qalab isboorti guddoonsiiyeen Gobalada Puntlanad, waxayna booqashadu ku dhamaatay sidii loogu talagalay.
Ciidamada Dowladda oo si xun ula dhaqmay shaqaalaha Idaacadda Shabeele
Iyadoo ay baaritaano ka socdaan qaybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha oo ay wadaan ciidamada Dowladda iyo Itoobiya ayaa maalintii shalay ahayd waxaa ciidamo ka tirsan Dowladda oo isugu jira Milatari iyo Booliis ay Galeen Idaacadda Shabeele.
Ciidan gaaraya ilaa iyo sideed askari kuna hubeysan qoryaha fudud ayaa galay Idaacadda Shabeele, waxayna weriyaashii iyo Shaqaalihii Idaacadda ku amreen in ay keenaan wixii hub ah oo ay haystaan iyagoo markaasi meel isugu geeyey.
C/rashiid Cabdi Rashka oo ka mid ah raggii sida xun loola dhaqmay ayaa isagoo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yiri:
�Qori ammaankiisu furan ayay igu qabteen, gacmahana kor u tag ayay I yiraahdeen, waxayna yiraahdeen haddii Idaacadda laga helo hub waan idin dileynaa�.
Sidoo kale Fartuun Axmed Xasan oo ka mid ah maamulka Idaacadda ayaa iyana iyadoo arrintaasi ka hadleysa waxay tiri �Askar qoryo wadata ayaa albaabka ii soo galay, qoryihii ayay igu foorariyeen, markaas ayay waxay igu yiraahdeen haddii hal bistoolad laga helo waan ku dileynaa, mid kale ayaa yiri isla goobta ayaan ku dileynaa�.
Jamaac Axmed Cismaan oo ka mid ahaa weriyaashii xiligaasiIdaacadda gaar ahaan Studio-ga ayaa qoryo lagu qabtay, waxa uuna ku wargeliyey in Idaacadda hawada ku jirto, balse dheg jalaq uma siin oo baaritaankoodii ayay iska wateen, waxayna u tageen C/Nuur Max�ed Kediye oo isagu markaasi fadhiyey gursiga Stuudiyaha markaas oo ay Idaacadda toos ugu jiray hawada, waxa uuna askartii ku wargeliyey in Idaacaddu toos hawada ugu jirto, sidaa darteed ay wanaagsan lahayd in askartu qaybaha kale baaraan, balse waa ay ka madax adeegeen.
Waa markii labaad oo Idaacadda Shabeele Baaritaan ku sameeyaan Ciidamada dowladda Federaalka iyagoo ka waayey wax hub ah, sidoo kale baaritaankii shalay ayaa maamulka Idaacadda lagu wargelin, isla markaana ay ciidamadu ahaayeen kuwo iska soo galay Idaacadda, isla markaana si anshaxa ka baxsan ula dhaqmay Shaqaalihii Idaacadda.
Jabhada Midawga Xoraynta S/Galbeed (JMXS)
Waxay Ciidamada Tigreegu ka wadaan Gobalka Soomaali Galbeed 20 bari ee u dambaysay Xasuuq naxariis la,aana ah kaasoo isugu jira: (Dil, Dhaawac, Kufsasho, Dhac, Xidh xidhid, Gaajayn, IWM).
Hadaba anagoo ah : Jabhada Midawga Xoraynta Soomaali Galbeed:
1- waxaan Cambaaraynaynaa Xasuuqaas ay Ciidamada Tigreegu ka wadaan gobalka waxaana u sheegaynaa inay si dag dag ah u joojiyaan.
2- Waxaan u balan qaadaynaa shacabka inaan uga soo aarayno cadawga uuna in badan ka shalaayi doono waxa uu Shacabka ku samaynayo.
3- Waxaan caalamka ka codsanaynaa inuu soo fara galiyo qadiyada S/Galbeed lana saaro madaxda Tigreega maxkamad caalamiya oo ah (Xasuuq Shacab).
4- Waxaan ka codsanaynaa umada Islaamka in gurmad dag dag lala gaadho shacabkaas la xasuuqayo.
5- Jaaliyadaha S/Galbeed ee dibada ku nool waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan halganka xoraynta wadanka (Naf & Maalba).
Alaahu Akbar ��Alaahu Akbar��.Allaahu Akbar.
Jabhada Midawga Xoraynta S/Galbeed
Xaflad lagu qabtay Safaaradda Somalida ee sanca
6/7/2007:-(Sana�a):- Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa xalay lagu qabtay Gudaha Safaaradda Somaaliyeed ee Sanca. Xafladdan oo ay ka soo qayb galeen Diplomasiyiinta iyo Hawlwadeennada Safaaradda, Odayaasha Bulshada Soomaaliyeed ee Sanca, Haween, Dhallinyaro, Fannaaniin, Arday iyo Marti-sharaf kale oo lagu casuumay ayaa waxaa ay ahayd :-Xaflad lagu soo gunaanadayay Xaflado xiriir ahaa oo ay Soomaalida Yemen ee Gobollada iyo degmooyinka Yemen ku sugan ay ku maamuusayeen Maalmihii Gobannimada iyo Midnimada Soomaaliyeed ee 26-ka Jun iyo 1-da Luulyo.
Xafladdan oo dhowr qaybood ka koobnayd, ayaa waxaa gaba-gabadii Khudbad dheer ka jeediyay Danjiraha Jamhuuriyadda Somalia ee Sanca-Yemen:-Cabdisalaam Macallim Aadan. Wuxuu Danjiruhu Khudbaddiisa ku xusay Halgankii dheeraa ee ay dadka Soomaaliyeed u soo galeen Gobannimadooda iyo Midnimadoodaba. Wuxuu ka shanqariyay inay Geesiyaal badan oo taariikhda baal dahab ah ka galay oo Dalka u dhintay ay jiraan, ujeeddaooduna ahayd kor u qaadidda madaxa dadka Soomaaliyeed iyo in uusan asaaggood gumaysan.
Danjire/Cabdisalaam oo ka codsaday inay dadka Soomaaliyeed midoobaan, gacmahana is-qabsadaan, nabadaynta iyo dib u dhiska dalkana u soo jeestaan, ayaa Hambalyo u diray Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, DFKMG ah iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, wuxuuna u rajeeyay guul, horumar, nabadgalyo iyo degganaan..
Waxaa Xafladda kaalin muuqata kaga jiray Haweenka Soomaaliyeed ee Sanca, kuwaas oo soo diraayiyay Qurxintii Goobta Xafladda, Maaweelo, Suugaan iyo weliba Cunitaan iyo Cabitaan fudud oo aad loogu riyaaqay.